Pump valve izingxenye-36
Ukusakazwa kwensimbi kuyinkqubo yesimanje enezimpande zasendulo. Enqubeni yokusakaza yensimbi, ukwakheka kwensimbi kwakhiwa ngokuthela insimbi encibilikisiwe emgodini wesikhunta, lapho ipholile futhi kamuva ikhishwe kusikhunta. Ukusakazwa kwensimbi ngokusobala kuyinqubo yezimboni yokuqala neyaba nomthelela omkhulu emlandweni. Kujwayele ukwenza izinto eziningi zensimbi ezisetshenziswe empilweni yethu yansuku zonke: izingxenye zezimoto, amasondo esitimela, okuthunyelwe kwamalambu, ama-pedals ebhasi lesikole, nokunye okuningi.
Pump valve izingxenye-44
Izingxenye zempompo Valve Izinsimbi zokuphonsa ipompo
Handrail Ubakaki, High inqubo ekubunjweni
Ukusakazwa kwensimbi ngokusobala kuyinqubo yezimboni yokuqala neyaba nomthelela omkhulu emlandweni. Kujwayele ukwenza izinto eziningi zensimbi ezisetshenziswe empilweni yethu yansuku zonke: izingxenye zezimoto, amasondo esitimela, okuthunyelwe kwamalambu, ama-pedals ebhasi lesikole, nokunye okuningi.
Ukusakazwa kwensimbi kuyinkqubo yesimanje enezimpande zasendulo. Enqubeni yokusakaza yensimbi, ukwakheka kwensimbi kwakhiwa ngokuthela insimbi encibilikisiwe emgodini wesikhunta, lapho ipholile futhi kamuva ikhishwe kusikhunta. Ukusakazwa kwensimbi ngokusobala kuyinqubo yezimboni yokuqala neyaba nomthelela omkhulu emlandweni.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/35